Jumma Mubarak Pic 2018 Images Nge New Collection - Jumma Mubarak 2018 : ukubaluleka, ezimbini, iintsikelelo, ः ades, kanye Quran
admin UTshazimpuzi 19, 2018 jumma Mubarak pic Andinamazwi
Hello amalungu abathandekayo
Alhamduillah kwenye jummah inkosi yonke imihla lifikile again.and siye kwakhona nawe nge jumma Mubarak pic
Dear Allah. Ndiyathandaza ukuba nabani na ofunda le ngeposi liya kuba intuthuzelo yenu,injabulo,uxolo,uthando,kunye guidance.I ukuze bangazi iimbandezelo zabo,kodwa do.please qhubeka esikhusela nathi.“Ameen”.
apha kwafika imini yonke iintsikelelo kunye sawab more ibhaso ngu Allah.
mhlawumbi sifumana ibhaso ngenxa Ukhonza zethu onamandla Allah Kweli day.we ezixabiseke ngayo abalandeli unqulo owalela ithemba.
thina iUma womprofeti ukuba akazange ithemba lekamva enoba iimeko.
“Rasulallah S.A.W uthe: “mini ibalulekileyo lweveki ukuba ilanga liphuma kwi,yimini jum'ah.”
“ngobusuku jum'ah “ubusuku phakathi ngoLwesine nangoLwesihlanu”kunoyolo umhla jum'ah yi kusikelelwa.
ukuba Muslim uza ngakumbi nje Masjid “uThixo”ifuna ingqalelo yakho nje ukuya yakho.
Alhamdolillah namhlanje jum'ah
Masenze dua for All iUma iMuslim
lonke usapho kunye nabahlobo bam
i Ndiyathemba uya kuba mkhulu
Ngamana Allah ukwamkela du'as zakho kule mini esikelelekileyo Ameen
Almight Dear! kubangele ukuba endleleni ekunene!
Ya Allah ndivuse
ngaphambi kokuba i ze liphele
” Ungaze ungalahli ithemba lakhe nothembe ngamandla dua,
Allah uya kukunika yonke into ofuna logama nje kulungile kuwe”
ube InshaAllah olukhulu veki.
enika ivumba layo ukuba nkqu isandla
Thandaza kuyinto exchange emangalisayo, enikezelweni wena ezikhathazayo yakho Allah kwaye “uThixo” handsover iintsikelelo bakhe ukuba wena nje umthandazo Jumma Mubarak.
Jumma Mubarak Latest Best Images,Umfanekiso 2018
EtiMnga 20, 2017 Andinamazwi
EtiMnga 10, 2017 2 izimvo
EyoMdumba 26, 2018 Andinamazwi
EyoMdumba 16, 2018 Andinamazwi